Wararka Gudaha – Page 5 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
DEG-DEG: Camaliyad Nafhurnimo oo ka dhacday Muqdisho.
Naftii hure katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar Nafhurnimo ah ku qaaday xarunta maamulka degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir. Jugta camaliyadda waxaa laga maqlay qeybo badan oo katirsan Muqdisho, waxaana burbur…
Weeraro Saf ballaaran ah oo ka dhacay Jubbooyinka iyo Shabeellaha hoose.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay fuliyay weeraro saf ballaaran ah oo ka dhacay qeybo kamid ah gobollada Jubbooyinka iyo Shabeella hoose. Mujaahidiinta ayaa weeraray saldhigyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa…
Qarax ka dhacay Inta u dhexeysa Ceelasha biyaha iyo Siinka-dheer.
Qarax xoogan ayaa ka dhacay wadada u dhexeysa Ceelasha biyaha iyo deegaanka Siinka-dheer oo dhaca duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxa uu haleelaya qarax gaari nooca Cabdi bile ah oo ay saarnaayeen askar katirsan ciidamada…
Askari Ugandes ah oo toogtay Ciidamo katirsan Shisheeyaha.
Askari katirsan ciidamada Shisheeyaha Uganda ee duulaanka ku jooga dalka Soomaaliya ayaa toogtay ciidamo iyo saraakil katirsan kuwa saaxabadiisa ah ee ku wehlinaya duulaanka ay ku joogaan wadankeena. Dilkan ayaa ka dhacay gudaha xerada…
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbi doonaa warka subaxnimo oo qodobo kala duwan lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso war subax 14 05 2019
halkaan ka dhegeyso dhuuxa
guuleed	 May 13, 2019 0
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo caawo qodobo kala duwan lagu soo qaatay. Dhuuxa wareysiyada 13 05 2019.
Halgankii Daraawiishta: Dhagayso Qeybta 8-aad.
Axmad	 May 13, 2019 0
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa warka duhurnimo oo macluumaad muhiim ah ximbaarsan Halkaan ka dhegeyso war duhur 13 05 2019
Dhagayso: “Waa naga Xaaraan Daadinta Dhiiga Muslimiinta”.
Kalimad cusub oo ay baahisay mu'asasada Alkataa'ib lana dhageysan karo muddo 19 ayuu Sheekh Mahad Warsame Abuu C/Raxmaan kaga hadlayaa arimo dhowr ah oo ku saabsan Jihaadka ka socda bariga Africa, kuna soo gudbinayaa fariimo muhiim ah oo ku…
Halgankii Daraawiishta: Dhagayso Qeybta 7-aad.